Xog: Go’aannada adag ee la filayo in laga soo saaro shirka maamul goboleedyada | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Xog: Go’aannada adag ee la filayo in laga soo saaro shirka maamul...
Xog: Go’aannada adag ee la filayo in laga soo saaro shirka maamul goboleedyada
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay Saxaafada ayaa sheegaya in go’aano adag ay kasoo bixi doonaan Shirka maanta furmaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug.
Xog hoose oo muhiim ah oo ay heshay Caasimada Online ayaa sheegaya in dhinacyada ay isku raaci doonaan in dalka ay ka qabsoonto doorasho waqtigeeda ah iyo in laga soo horjeesto qorshaha Villa Somalia ee doorashada dalka iyo dib dhac ay qorsheneyso madaxtooyada Somalia.
“Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa wax ka og shirka waxaana ka soo bixi doona go’aano culus intaasna makuu dhaafin karo,” ayuu yiri mudane ka tirsan baarlamaanka Somalia oo Dhuusmareeb ku sugan.
Indhaha Caalamka ayaa ku jeeda Dhuusmareeb waxaana go’aanka halkaas ka soo baxa loo arkaa mid muhiim u ah Shacabka Soomaaliyeed islamarkaana uu noqon karo mid dhinac u rida jahwareerka Siyaasadeed ee Somalia.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Billad Sharaf guddoonsiiyay guddiga qabanqaabada toddobaadka xoriyadda
Next articleRajo la’aanta qoysaska suxufiyiin Soomaaliyeed ee la dilay